သငျသညျမြန်မာလည်ပတ်ခဲ့ဖူးဘူးဆိုပါက (ယခင်ကမြန်မာနိုင်ငံ) ယခုချစ်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြည့်ရှုရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. မြန်မာ eons များအတွက်အိပ်ပျော်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ယခုအခါတဖြည်းဖြည်းနှိုးထနေသည်.
မြန်မာ / Nurma အိန္ဒိယကအဓိကအားဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်အရှေ့တောင်အာရှရှိတည်ရှိပြီးဟောင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, တရုတ်နိုင်ငံ, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် fronting ရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်းနှင့်အတူလာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ.
သငျသညျ comercialised ကျော်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံများတွင်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကိုချစ်လျှင်မြန်မာကိုသွားရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. အစဉ်အလာမြန်မာ့အစားအစာကိုမြည်းစမ်း, ဒေသခံရွာတွေကို daytrip, ခမ်းနားရေကန်ကျော်ငုပ်, တောင်ကြီးတောင်ငယ်တောင်တက်သွားရ, စူးစမ်းလေ့လာ 1,000 နှစ်အရွယ် archelogical အပျက်အယွင်းများနှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြုံးဒေသခံများကအစည်းအဝေး.
Tousism ရုံဤလှပသောတိုင်းပြည်ကိုင်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်နိုင်ငံ၏ quaint ဟောင်းကမ္ဘာကြီးကိုကျက်သရေမြင်တွေ့ကြုံခံစားရန်နေရာများပဒေသာရှိပါတယ်. မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲသင်၏ပုံးစာရင်းများအတွက်သုံးသောနေရာများရန်ကုန်မြို့ခမ်းနားရွှေဒဂုံစေတီတော်များပါဝင်သည်ရန်ရှိသည်, တော်ဝင်မန္တလေးမြို့တွင်နန်းတော်နှင့် 1,000 ပုဂံ၏နှစ်အရွယ်ရှေးဟောင်းဗိမာနျတျောအံ့ဘွယ်သောအမှု.
မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်နေပြည်တော်ဖြစ်ပါသည်, အသစ်ဖန်တီးမြို့ (2006) ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးအကြားတိုင်းပြည်အလယ်၌. အကြမ်းဖျင်း 300Km တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်. နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်နေတုန်း, ရန်ကုန် (ယခင်ကရန်ကုန်ရှိ) အဆိုပါ ecomonic စင်တာဖြစ်နေဆဲ, မန္တလေးယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှင့်ပုဂံဖြစ်နေဆဲ (ယခင်ကပုဂံ) တိုင်းပြည်များ၏ရှေးဟောင်းအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်.
ရန်ကုန်, အိမ်သို့6လူဦးရေသန်းနှင့်ယခင်မြို့တော်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအကြီးဆုံးမြို့တော်, တစ်ဦးစည်ကားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းပေါ်ရှိနိုင်ငံ၏တောင်ဘက် Adaman ပင်လယ်မှတွေအကြောင်း 20km အထက်တည်ရှိသည်. ဒီနေရာတွင်သမိုင်းဝင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဆောက်အဦးများနှင့်ညားစေတီပုထိုးများကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာနှင့်ညဉ့်စျေးကွက်စူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်, စားသောက်ဆိုင်, ပွင့်လင်းသောလေထုလမ်းပေါ်အစားအစာငျးကုနှင့်စျေးဝယ်စင်တာများ. ဒါဟာသင့်ပတ်လည်က to trip motobikes ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာမြို့မဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကအများအားဖြင့်အလွန်စျေးပေါသောတက္ကစီ၏သင်္ဘောအုပ်စုတွေများအတွက်အစားမြို့ဝင်ရောက်ခြင်းကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်ပြီ. ရန်ကုန်မှာလည်းပဲခူးနဲ့တူမြို့များအပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးလက်စူးစမ်းဖို့တစ်ရက်ခရီးစဉ်ယူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေခံရန်ပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါသည်, dalah, တွံတေး, သန်လျင်နှင့်ကျောက်တန်းမြို့နယ်.
မန္တလေး, အိမ်သို့ 1.5 လူဦးရေသန်း, Myamnar အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏. ဒါဟာဧရာဝတီမြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်တိုင်းပြည်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် (ယခင်ကဧရာဝတီမြစ်) ရန်ကုန်အချို့ 650k မြောက်ဘက်. တမြို့လုံး၏ဗဟိုအရပ်ရပ်အပေါ် 2km ရှည်လျားသောကျုံးကဝိုင်းထားတဲ့ကြီးမားတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်ကလွှမ်းမိုးနေသည်. မန္တလေး, ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်ယခင်မြို့တော်, ထိုကဲ့သို့သောအင်းအဖြစ်ပင်အဟောင်းတွေစာလုံးများ၏အပျက်အယွင်းများကဝန်းရံဖြစ်ပါသည် (အင်း), စစ်ကိုင်းနှင့်အမရပူရ. ဤနေရာတွင်မရှိနိုင်ပါမိမိကိုယ်ကို drive ကိုကားများသော်လည်းသင်စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်ကယ်ငှားသို့မဟုတ်အနိမ့်မှုနှုန်းအဘို့နေ့ရက်သည်တစ်ဦးတက္ကစီငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်. ရှေးခေတ်က်ဘ်ဆိုက်များစာရေး, ဘုရားပုထိုးစေတီ, ဘုရားကျောင်း, လက်မှုပညာနှင့်ကျောက်စိမ်း & ကျောက်မျက်စျေးကွက်နှင့်ဒေသခံစျေးကွက်ပိုပြီးအနောက်တိုင်းစတိုင်စျေးဝယ်စင်တာများတစ်ဦးတိုးပွားလာနှင့်အတူစူးစမ်းဖို့. သငျသညျလမ်းပေါ်တငျးကုနှင့်စားသောက်ဆိုင်များမှာစားသောက်မှုအတွက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်. မန္တလေးအင်းနဲ့တူသောနေရာများမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်အဘို့ကြီးစွာသောအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်, စစ်ကိုင်း, အမရပူရ, မင်းကွန်းနှင့်အင်းလေးကန်. ဒီကနေသင်တို့သည်လည်းတောင်တက်ရွေးချယ်စရာ oodles များအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်သို့တက်ခေါင်းနိုင်ပါတယ်.
ပုဂံ မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည် 450 အကြားအနှစ် 850 သို့ 1300 အေဒီ. ဒါဟာတော်တော်လေးဧရိယာစာသားကျော်နှင့်အတူနေရာတိုင်း dotted ဖြစ်ပါတယ် 2,000 ရှေးဟောင်းဘုရားပုထိုးစေတီများနှင့်ဘုရားကျောင်းအချို့ကျော်ပြန့်နှံ့ 100 စတုရန်းကီလိုမီတာ. အတော်များများကခရီးသွားများအတွက်ပုဂံ site ကို Angkor Wat ၏ကမ္ဘောဒီးယား site ကိုအပြိုင်ပြောပါ, အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ပုဂံယုံကြည်သည်ခံရဖို့ကိုတှေ့မွငျခဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့အရာတစ်ခုခုသည်, နှင့်နေထွက်နှင့်နေဝင်ဆည်းဆာ, သူတို့ရိုးရိုး stunning နေကြတယ်. အဆိုပါဧရိယာရှိပါတယ်3လူအပေါင်းတို့သည်ဧရာဝတီမြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်တည်ရှိပါတယ်မြို့နယ်များတွင်, အရှေ့ဖို့အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ညောင်ဦးမှဟောငျးပုဂံနှင့် New ပုဂံ. ညောင်ဦးမြစ်လှေများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်ပါသည်, ကူးတို့, ဘတ်စ်ကားနှင့်အနီးဆုံးလေဆိပ်ကိုမြို့နှင့်ရထားလမ်းဘူတာဖြစ်ပါတယ်. ပုဂံ Swing နိုက်ကလပ်အများကြီးကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်နှောင်းပိုင်းကမရောက်မှီတိုင်အောင်, ပွင့်လင်းနေဖို့ကြောင်းဒေသခံများနှင့်ယခုလက်ရှိတွင်နှစ်ဦးစလုံးစားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်၏ရိုးရာရုပ်သေးပြပွဲနှင့်အမှိုက်ပုံရှိပါတယ်. သငျသညျမိမိကိုယ်ကို Tour များအတွက်စျေးပေါစက်ဘီးသို့မဟုတ် E-စက်ဘီးငှားရမ်းသို့မဟုတ်အားလုံးကိုအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှုန်းမှာဒေသခံမြင်းလှည်းငှါးနိုင်ပါတယ်.
ဒီ site န်းကျင်ကိုကြည့်ရှိသည်နှင့်တိုင်းပြည်သွားလာချစ်သောသူတို့သည်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဘယ်အရာကိုမြင်. သငျသညျသွားရောက်ချင်ပါတယ်သောအရပ်တို့ကိုအချို့အတွေးအခေါ်များကိုရယူပါ, ထို့နောက်သင့်အိတ်ထုပ်ပိုးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်ပယ်ဦး, သင်လုပ်ခဲ့တယ်သည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်.